आफ्नी क्या’न्सर प्रेमिकालाई अस्पतालमै विवाह गरे यी प्रेमीले, तर विवाह भएको केही घण्टामा नै प्रेमीकाले छाडिन् संसार ! – AB Sansar
December 15, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on आफ्नी क्या’न्सर प्रेमिकालाई अस्पतालमै विवाह गरे यी प्रेमीले, तर विवाह भएको केही घण्टामा नै प्रेमीकाले छाडिन् संसार !
एजेन्सी । डेविड र हीथर एक अर्कालाई असाध्यै माया गर्ने जोडी हुन् । दुवैजनाले मायालाई विवाहामा परिणत गर्ने योजना बनाए र विवाह गर्ने निर्णय पनि गरे । तर, एकदिन हिथरलाई अचानक क्यान्सर भएको थाहा भयो । क्यान्सर मात्र नभएर हीथरको मृ’त्यु चाँडै हुने कुराको पनि जानकारी डेविडले पाएका थिए । तर डेविडले हिथरको स्वास्थ्यको बारेमा यस्तो कुरा सुनेरपनि मायामा कुनै कमी गरेनन् । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****